Kaalmo dhaqaale - Migrationsverket
/ Kaalmo dhaqaale oo ku saabsan dib u dejin
/ Kaalmo dhaqaale
Ekonomiskt stöd till återetablering – somaliska
Qofka dib ugu laabanaya wadankiisii wuxuu haystaa fursad uu kaalmo dhaqaale kaga codsado Hey’adda laanta socdaalka. Kaalmadaa waxa loogu talagalay qofka dib ugu laabanaya wadankiisii hooyo halkaas oo ay ka jirto dhibaatooyin sidii uu dib ugu degilahaa qofkaasi sababtuna ay tahay khilaafyo ka jira dhinacyada bulshadaad. Kaalmada dhaqaale waxaad adigu codsanaysaa inta aad wadanka Iswiidhan joogto.
Waxa kaalmada dhaqaale lagu siinayaa haddii aad ka timid mid ka mid ah wadamadan soo socda:
Afghanistan, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska Republiken Kongo, Elfenbenskusten, Eritrea, Irak, Jemen, Liberia, Libyen, Mali, Sierra Leone, Somalia, Palestina, Sudan, Sydsudan, Syrien, Tchad.
Shuruudaha lagugu siinayo kaalmada
Kaalmada waxa adiga lagu siinayaa haddii
haddii diidmo lagaa siiyey codsigaagii magangelyodoonka ahaa ama haddii aad adigu dib uga laabtay codsigaagii magangelyodoonka ahaa inaad wadanka iska dhiibto
ay tahay wax adiga kaa soo go’ay inaad dib ugu laabatid wadan ay adag tahay in aad dib u degtaa sababtuna ay tahay xadidnaan ku saabsan dhinaca khilaafyada iska soo horjeeda awgeed.
ay dhici karto inaad ku noolaanaysid wadankaa aad ku laabanaysid
waa inaad wadanka Iswiidhan joogto ama aad ku sugan tahay markaad codsiga samaynaysid.
Dadka qoyskaaga ka midka ahna waxa la siinayaa kaalmo: ninkaaga, xaaskaaga (ooridaada), qofka aad nolosha wadaagtaan (sambo), carruurta ka yar 18 sannadood ama qaraabo adiga kuu dhow oo adiga kula nool. Sid loo siiyo kaalmadaa dhaqaale dadka qoyskaaga ka midka ah waa inay iyaguna sidoo kale wadanka Iswiidhan joogaan.
Codsiga iyo go’aanka
Waxaad adigu codsankartaa kaalmada dhaqaale ee dib u dejinta marka diidmo lagaa siiyo codsigaagii magangelyodoonka ahaa ama marka aad adigu shakhsiyan dib ula soo noqotid codsigaagii magangelyodoonka ahaa. Codsiga waxaad samaynkartaa muddo laba bilood gudaheeda ah marka ay ka soo wareegto go’aankii diidmada ahaa ama marka aad adigu shakhsiyan dib ula soo noqotid codsigaagii magangelyodoonka ahaa.
Codsiga ku saabsan kaalmada dhaqaale ee dib u dejinta waxaad ka samaynkartaa qaybta adiga ku qaabilsan qofka ka shaqeeya ee arrimahaaga gacanta ku haya (mottagningshandläggare) markaa kadib waxa go’aanka gaaraya Hey’adda laanta socdaalka in adiga kaalmada dhaqaale lagu siinayo iyo inkale. Go’aanka ay Hey’adda laanta socdaalku soo saarto ee khuseeya kaalmada dhaqaale ee dib u dejinta qofka lasiiyo rafcaan lagama qaadankaro oo lagama dacwoonkaro.
Kaalmada dhaqaale waxa lagu bixinayaa oo lagugu siinayaa wadankaaga
Hey’adda laanta socdaalku waxay wadashaqan la leedahay Ururka caalamiga ah ee qaabilsan dadka haajiray waxana marka la soo gaabiyo loo yaqaanaa IOM ama (International Organization for Migration) kuwaas oo inta badan wakiil uga ah oo jooga wadamada la siiyo kaamlada dhaqaale dadka dib ugu laabanaya wadankoodii. Ururka la yiraahdo IOM ayaa lacagta kugu siinayo wadankaagii. Inta aanad wadanka Iswiidhan ka tegin waxa lagu siinayaa xafiiska IOM ay ku leeyihiin wadankaaga telefoonkiisa. Markaad wadankaaga tagtid ama aad timaadid ayaad telefoon ku wacaysaa oo ballan ka qabsanaysaa si laguu siiyo kaalmadii dhaqaale ee adiga laguugu talagalay.
Lacagta waxa lagugu siinayaa iyadoo US-dollar ah waxaana lagu siinayaa halmar iyadoo isku dhan. Marka aad lacagta doonanaysid waxaad sii qaadanaysaa oo aad tusaysaa baasaboor iyo koobi ama nuqul ku saabsan go’aankii arrinta lagu gaaray haddii aad doonayso in lagu siiyo kaalmada dhaqaale ee loogu talagalay dib u dejinta.
Haddii aanay ururkan la yiraahdo IOM ku lahayn xafiis wadankaaga markaa kaalmada dhaqaale waxa lagaa siinayaa wadanka Iswiidhan intaanad ka bixin.
Ka akhriso macluumaad intaa ka badan oo ku saabsan IOM (international Organization for Migration)
Intee ayay leegtahay kaalmada dhaqaale
Kaalmada dhaqaale ee dib u dejintu waxa la siinayaa qofkaska oo ka weyn 18 sannadood lacag u dhiganta 30 000 oo karoon oo lacagta Iswiidhishka ah, carruurta da’doodu ka yar tahay 18 sannadood waxa la siinayaa 15 000 oo karoon. Hal qoys lacagta ugu badan ee la siinayaa waa 75 000 oo karoon.
Haddii aad sheegto warbixin aan sax ahayn
Hey’adda laanta socdaalku waxay gaarikartaa go’aan ku saabsan inaad lacagtii oo dhan soo wada celinaysid iyo in aad qayb ka mid ah soo celinaysid haddii
aanad si iskaa ah oo adiga kaa soo go’aday dib ugu laaban ama aad si sharcidaro ah wadanka Iswiidhan markale dib ugu soo laabatid
aad sheegtid warbixin aan sax ahayn ama kaalmada dhaqaale ee lagu siiyey aad si khaladan u qaadatid ama lacag badan si khalad ah lagugu siiyey.